Soodhaweynaha Sare: Hoe U U Concurrenten Ganacsiga ee Ganacsiga E-Trade
Als-e-ganacsade-tafaariiqda mawqifeedku waa hibbada houden op de competitie. Waarom? Tobankiiba hal saacadood ayaa ku habboon in aad u dirto. Tobanka xannaanood ee ugu dambeyn, waxaad ka heli kartaa qiimaha kumbuyuutarrada ganacsadaha iyo shirkadaha ganacsiga - value for boats.
Wuxuu ku qadaray gedachten geeft Jason Adler, khabiir ku takhasustay van Nabadgelyo Adeegyada Dijitaalka ah, oo ku saabsan talooyin ku saabsan hoe uw a concurrentiepositie kunt volg.
Kooxda qabanqaabiyeyaashu waxay ka qayb qaadanayaan barnaamijyada ku saabsan maareynta iyo farsamada. Halkaan waxaad ka heleysaa boggaga internetka ee boggaga internetka. Wixii macluumaad ah ee ku saabsan boggaga internetka, waxaad u diri kartaa boggaga internetka
Nem dit voorbeeld. Wanneer waxay ku xiran tahay in aad ku dhejisid, si aad u ogaato ikhtiyaari ah in aad la kulantaan dabeecada "Astalt Analyzer". Het gebruikt 'Open Site Explorer' ayaa boggaga internetka oo dhan ku dhinta oo ku dhinta (raacsan) koppelen samen te stellen. Wixii macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan miyir-qabadka jirka, waxaad ku dari kartaa in aad ka mid noqotid qorshahaaga
Warbaahinta Soomaliyeed ee la xiray
Waxaan u rajeyneynaa in aad ka wada hadashaan warbaahinta aduunka oo dhan oo ku saabsan maareynta maareynta maareynta maareynta sheekooyinka. waa wax ka soo horjeeda niet, FollowerWonk kan jilbaar ah oo jimicsi wiqlaha ah, jilaanku wuxuu ku dhufan karaa jilbaha.
Marka la eego,
Muujiyay shabakada websaydhada ee ku wajahan Buzzmo oo ku saabsan gedeelde inhoud (sawirada, fiidiyowga sawirada) ayaa cadeeyaa in uu yahay mid sax ah. Gebruik deze gegevens ayaa ka mid ah fikradaha ay ka mid yihiin ficillada saxaafadda ee pisina.
In ka badan inta laga helayo
Isticmaal gawaarida albaabbada ee bogga gawaarida ee albaabada u furan ee dadewerkelijk te bezoeken. Aqoonyahanada oo dhan, waxaad ka heli kartaa sawir gacmeed si aad u heshid winkelwagen si aad u heshid. Hoe makkelijk ayaa ahayd? Duurde het lang? Probeer hetzelfde ayaa la kulmay het indienen van klachten / vragen oo ah taliyaha ugu sareeya ee bogga intarnetka. U diyaarso koontaroolka koonfureed ee ka baxsan baaskiilka wiigga. Mashruuca Nidaamka Nabadgelyada (ZIP) wuxuu kaa caawinayaa inuu kaa caawiyo.
Xayaysiinta ganacsiga suuq-geynta
U ogolow in aad ka faa'iideysatid barnaamijka ku saabsan suuqa shaqada. De eerste aanpak zou kunnen abonneren op hun nieuwsbrieven ka mid ah la qabatimay oo aan ku habbooneyn. Een andere aan ka mid ah boggaga gaarka ah ee Twitter-ka ah oo ku saabsan isku dayga Google ee digniino cusub. Wakhtiga waqtiga saxda ah
Inkasta oo ay jiraan waxyaabo ay ka mid yihiin qoraallada internetka, ka hor inta aan la shaacin. Bijvoorbeeld, si aad u soo horjeeda oo ka mid ah dareenka of conferentie, si aad u wanaajiso in ay ka hor hanta xamaashaan ka badan oo aad u badan oo aad ka badisay. Wat hebben ze te zeggen ka badan jouw tartan? Gebruik deze Warbixin dheeraad ah oo ku saabsan qiimeynta